Yeka ukuDlulisa ukuThwala kum ... Martech Zone
Yeka ukuDlulisa ukuThwala kum
NgeCawa, ngoFebruwari 3, 2013 NgeCawa, ngoFebruwari 3, 2013 Douglas Karr
Kuya kufuneka uthande "Weird Al". Ubethe ingoma emangazayo ngale ngoma… ndinabahlobo kunye nosapho abakholelwa ukuba basebenza kwi-Intanethi kukudlulisa yonke into… ngaphandle kokuyikhangela, ngaphandle kokujonga ukusebenza kwayo Snopes, okanye ngaphandle kokuzibuza ukuba ndixakeke kakhulu ukuba ndijonge imifanekiso engama-42 eqhotyoshelweyo yokuhlangulwa [faka isilwanyana esihle sana]. Ayothusi into yokuba aba ngabantu abaphinde bafumane uncedo kuba ikhompyuter yabo ihamba kancinci ngalo lonke ixesha!
Kukho umyalezo apha kubathengisi ngokunjalo. Ukuba sidiniwe ngabahlobo kunye nosapho lokuhambisa phambili kuthi nge-imeyile, ucinga ukuba sinesigulana kangakanani ukuba sine-imeyile? "U-Weird Al" wayenokwenza ngokulula ividiyo ethi "Yeka ukuthumela i-crap yakho kum" kwaye yayiya kubetha kwiindawo ezifanayo. Soloko ubonelela ngexabiso… hayi ukwenza izinto.
tags: yeka ukuhambisa phambili kumndiyothusa aluyinqaba al yankovich
Feb 4, 2013 ngo-6: 06 PM
Ndiphoswe njani yile ngoma kaWeird Al? Enkoso ngokwabelana! Owu, ingcebiso yokuthengisa nge-imeyile yayilungile nayo! =)